Akụkọ - Kedu ka ụlọ ọrụ biya siri nwetaghachi? Lee anya n'ogwe ọganihu nke mba ndị a
Ngwa ime biya biya
Akụrụngwa ime biya biya
Ngwa Nano Beer
Akụrụngwa ebe a na-eme biya
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ & ụlọ oriri na ọṅụṅụ Beer Brewing System
Sistemụ Brewhouse ụgbọ mmiri abụọ
Sistemụ ime mmiri ụgbọ mmiri atọ
Sistemụ Brew ụgbọ mmiri anọ
Sistemụ kpo oku Steam
Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ ozugbo
Sistemụ igwe ọkụ eletrik
Ụlọ ahịa ọla kọpa
Sistemụ ịgba ụka
Mmanụ aṅụ isi okpukpu abụọ
Otu mgbidi fermenter
Tank ịgba mmiri na-egbuke egbuke
Sistemụ biya na-egbuke egbuke
Single Wall Bright biya tank
Tank biya na-egbuke egbuke kwụ ọtọ
Ngalaba jụrụ oyi
Ngalaba ime mmanya CIP
Sistemụ njikwa ebe biya
Sistemụ mmanya akpaaka
Igwe na-ejuputa karama Beer&Mkpọ & Keg
Igwe na-ejuputa karama biya
Igwe na-ejuputa ite biya
Igwe Keg Beer
Ngwa na igwe inyeaka
Ebe nchekwa mkpụrụ osisi
Kedu ka ụlọ ọrụ biya si gbakere? Lee anya n'ogwe ọganihu nke mba ndị a
Ogwe na ụlọ oriri na ọṅụṅụ meghere otu otu, yana mgbake nke akụ na ụba abalị na ụbara akụ na ụba nke ụlọ ahịa n'okporo ámá, ahịa biya ụlọ egosila ezigbo mgbake. Yabụ, kedu maka ndị ọrụ ibe si mba ọzọ? Ụlọ ọrụ nka nke US bụ ndị na-echegbubu onwe ha maka enweghị ike ịlanarị, ụlọ mmanya ndị Europe na-akwado ihe ọṅụṅụ mmanya, na ụfọdụ ebe a na-emepụta ihe. Ọ dị ha mma ugbu a?
United Kingdom: Ogwe ahụ ga-emepe na Julaị 4 na mbụ
Onye odeakwụkwọ azụmahịa nke Britain Sharma kwuru na mmeghe nke ụlọ mmanya na ụlọ oriri na ọṅụṅụ "n'oge mbụ" ga-echere ruo July 4. N'ihi ya, a ga-emechi ụlọ mmanya Britain nke afọ a karịa awa azụmahịa.
Otú ọ dị, n'ime izu ndị na-adịbeghị anya, ọtụtụ ụlọ mmanya na UK na-enye biya biya, nke ndị na-aṅụ mmanya na-ewu ewu nke ukwuu. Ọtụtụ ndị hụrụ biya n'anya anụrịla biya biya mbụ n'ime ọnwa n'okporo ụzọ.
Ogwe na mba Europe ndị ọzọ na-emeghekwa ma ọ bụ na-achọ ịmalitegharị. Na mbụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ biya gbara ndị hụrụ biya n'anya ume ka ha zụta akwụkwọ ikike iji kwado ụlọ mmanya mechiri emechi nwa oge. Ugbu a, mgbe ụlọ mmanya ndị a nwere ike imepe ọzọ, ihe ruru karama otu nde biya biya n'efu ma ọ bụ akwụgoro akwụgoro na-echere ndị na-aṅụ mmanya ka ha bịarute.
Australia: Ndị ahịa mmanya na-akpọ ka a kwụsịtụ ụtụ isi mmanya na-aba n'anya
Dabere na akụkọ mgbasa ozi si mba ofesi, ndị na-emepụta biya, mmanya na mmụọ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ Australia ejiriwo aka gwa gọọmenti etiti ka ha kwụsịtụ ụtụ isi mmanya na-aba n'anya.
Brett Heffernan, onye isi ụlọ ọrụ nke Australian Brewers Association, kwenyere na ugbu a abụghị oge ịkwalite ụtụ isi oriri. "Mmụba nke ụtụ biya biya ga-abụ ihe ọjọọ ọzọ nye ndị ahịa na ndị nwe ụlọ mmanya."
Dị ka ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmanya na-aba n'anya nke Australia si kwuo, ire ahịa mmanya na-aba n'anya na Australia adaala nke ukwuu n'ihi mmetụta nke ọrịa okpueze ọhụrụ ahụ. N'April, ahịa biya dara 44% kwa afọ, na ire ere dara 55% kwa afọ. Na May, ahịa biya dara 19% kwa afọ, na ire ere dara 26% kwa afọ.
United States: 80% nke ụlọ ọrụ nka na-enweta ego PPP
Dị ka nyocha ọhụrụ nke American Brewers Association (BA) mere na mmetụta nke ọrịa na-efe efe na ụlọ ọrụ nka, ihe karịrị 80% nke ụlọ ọrụ nka kwuru na ha enwetala ego site na Mmemme Nchedo Payroll (PPP), nke na-eme ka ha nwekwuo obi ike. banyere ọdịnihu. obi ike.
Ihe ọzọ kpatara mmụba nke nchekwube bụ na steeti US amalitela ịmalitegharị maka azụmaahịa, na n'ọtụtụ steeti, edepụtara ebe a na-ere mmanya na ndepụta nke ọrụ ekwere na mbụ.
Ma ire nke ọtụtụ ndị na-akpụ biya adaala, na ọkara n'ime ha adaala 50% ma ọ bụ karịa. N'ịnọgide na-eche ihe ịma aka ndị a ihu, na mgbakwunye na itinye akwụkwọ maka mgbazinye ego mmemme nkwa ụgwọ ụgwọ, ndị na-emepụta biya na-ebelatakwa ọnụ ahịa dị ka o kwere mee.
Oge nzipu: Sep-05-2020
Nọmba 12111 Jingshi Road, Mpaghara Lixia, Jinan City, Shandong, China.